အာဇာနည်နေ့နှင့်ပတ်သက်၍ ဗိုလ်မှူးချုပ်ကျော်ဇော၏ ပြောပြချက်
ကိုယ်တိုင်ရေးအထ္တုပတ္တိ အပိုင်း ၃ စာမျက်နှာ (၇မှ ၁၀အထိ ကောက်နှုတ်ဖော်ပြပါသည်။)
ဘီဘီစီ. မေးခွန်းအမှတ် (၁)၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို အစစ်အမှန်သတ်သူဟာ ဘယ်သူလို့ ခင်ဗျားထင်မြင်ပါသနည်း၊
ဖြေ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို အစစ်အမှန်သတ်သူဟာ ဗြိတိသျှအစိုးရ ဖြစ်ပါတယ်၊ သူတို့ရဲ့လုပ်ကြံမှုကြီး ဖြစ်ပါတယ်၊
ဘီဘီစီ. မေးခွန်းအမှတ် (၂)၊ ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောနိုင်ပါသနည်း၊
ဖြေ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် - ဗိုလ်ချုပ်အသတ်ခံရတာမှာ အကြောင်းရင်း (၄) ခုရှိတယ်လို့ ကျနော် ထင်မြင်ပါသည်၊
(က) ပထမအကြောင်းကတော့ ဗိုလ်ချုပ်သည် တိုင်းပြည်တပြည်လုံးကို စည်းလုံးညီညွတ်အောင် လုပ်နိုင်သူခေါင်းဆောင် ဖြစ်ပါသည်၊ ထို့ကြောင့် ဗြိတိသျှ တို့သည် မြန်မာပြည်တပြည်လုံး စည်းလုံးညီညွတ်သွားမှာကို ကြောက်ကြပါသည်၊ွှသည်မှာ အဓိကအကြောင်းရင်း ဖြစ်သည်၊
(ခ) ဒုတိယအကြောင်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်သည် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီနှင့် ပြန်ပြီးစည်းလုံးညီင်္ညွတ် သွားနိုင်ပါသည်၊ ဗြိတိသျှတို့သည် ဤအချက်ကိုလည်း ပူပန်စိုးရိမ်ကြသည်၊
(ဂ) တတိယအကြောင်းမှာ ဗြိတိသျှတို့အနေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကိုဖယ်ရှားနိုင်လိုက်ရင် ဗမာပြည်ကိုလွယ်ကူစွာ ကိုင်တွယ်သွားနိုင်မည်ဟု ယူဆကြသည်၊
(ဃ) စတုတ္ထအချက်ကတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် ဗမာပြည်မှာ ဗြိတိသျှတို့. အုပ်စိုးမှုကို လက်နက်ကိုင်.ပြီး လွတ်လပ်ရေး အတွက်တိုက်ခဲ့သူ ဖြစ်သဖြင့် နောင်ဤကဲ့သို့မျိုး ဗြိတိသျှအင်ပါယာမှာ မပေါ်ရဲအောင် လက်စားချေဆုံးမရန်အတွက် တန်ပြန် သတ်ဖြတ်လိုခြင်း ဖြစ်ဟန်ရှိသည်၊
ဤအဖြေအတွက် အထောက်အထား အချက်အလက်များ ထင်မြင်ချက်များပေးရန် လိုတဲ့အတွက် အောက်ပါအတိုင်း အချက် တချို့ကို တင်ပြလိုက်ပါသည်၊
ဦးစော လက်နက်ကိုင်ရာဇ၀တ်မှုကြီး တခုအတွက် စီစဉ်လှုပ်ရှားနေသည်များကို ဗြိတိသျှအစိုးရက ကြိုတင်သိရှိနေခဲ့ပါသည်၊ ထိုလှုပ်ရှားမှုများသည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ဦးတည်နေသည် ဆိုသည်ကိုလည်း တို့နားလည်နိုင်သည်၊ ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်၍ ကျနော်မှတ်မိနေတာ (၂) ချက်လောက် ရှိပါသည်၊
ပထမအချက်။ အစိးု ရပုလိပ်အဖွဲ့က ဗိုလ်ချုပ်တို့ လုပ်ကြံမှုအရေးအခင်းမပေါ်ခင်ကတည်းကဦး စောရဲ့ အိမကို အိမ်နီးချင်း ခြံတခြံအတွင်းက သစ်ပင်ပန်းပင်တွေအကြား အမြဲစောင့်ကြည့်ဖို့ အလှည့်ကျ တာဝန်ချပြီး စောင့်ကြည့်ရတဲ့ အထဲမှာ ကျနော် နှင့် ဆွေမျိုးနီးစပ်တော်သည့် ပုလိပ်ကလေး မောင်မောင်ဆိုသူ (နောင် စစ်တပ်တွင်းပြောင်းလာသည်၊) က ကျနော့်ကိုပြောပြဖူးတာတွေ ရှိပါသည်၊ ဦးစောနှင့် ခြံအတွင်းလှုပ်ရှားနေပုံတွေကို အခင်းမဖြစ်မီ တပတ်အလို သူစောင့်ကြည့်တာဝန်ကျစဉ် တွေ့ရသမျှကို အထက်ကိုအစီရင်ခံရကြောင်း သူတာဝန်မကျစဉ် အချိန်ကတည်းက စောင့်ကြည့်နေကြတာဖြစ်လို့ ဒီလို စောင့်ကြည့်နေတာဟာ တပတ်မကနိုင်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။
ဒုတိယအချက်။ ၁၉၆၀ ခုနှစ်နှင့် (၇၀) ခုနှစ်များအတွင်း ဗိုလ်ချုပ်တို့ ကျဆုံးသော အာဇာနည်နေ့မှာမြန်မာသတင်းစာတစောင်ထဲတွင် ထိုနေ့အတွက် ဆောင်း ပါးတစောင်ပါလာပါသည၊် ဦး စောနေထိုင် သ ည့် အေဒီလမ်း နှင့် ဆိုင်သည့် မရမ်းကုန်းပလိပ်ဌာနမှ ထိုစဉ်က ဌာနအုပ်ဖြစ်ခဲ့သူ ပင်စင်စားပုလိပ်အရာရှိကြီး တဦးရေးသားသည့် ဆောင်းပါးထဲတွင် ဖွင့်ချထားသည်မှာ - ဗိုလ်ချုပ်တို့ အရေးအခင်းမဖြစ်မီ ဦးစောအိမ်ခြံအတွင်း လှုပ်ရှားဖြစ်ပျက်နေမှုတွေကို သူတို့ပုလိပ်ဌာနက ထောက်လှမ်းသိရှိပြီး အထက်သို့ အစီရင်ခံစာတွေ ရေးနေရသည်မှာ အတော်ကြာကြောင်း သူတို့လှုပ်ရှာသွားလာနေတာတွေ တွေ့ပြီး တခုခု ရာဇ၀တ်မှုကြီး လုပ်တော့မည်ဆိုသည်ကို သိနိုင်သော်လည်း အဘယ်ကြောင့်အရေးယူ ဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်ရန် အမိန့်မပေးသနည်း ဆိုသည်ကိုနားမလည်ကြောင်း ရေးသားထားပါသည်၊
ဤကိစ္စတွင် ဦးစောလှုပ်ရှားမှုတွေက ရာဇ၀တ်မှုကြီးတခုခု လုပ်တော့မည်ဆိုသည်ကို ဗြိတိသျှအစိုးရအနေနှင့် တော်တော်စောစောကတည်းကသိနေပြီး၊ ဘာကိုရည်ရွယ်သည်ဆိုတာလည်း သိနားလည်နိုင်ပါလျက် ထိထိရောက်ရောက် ကြိုတင်အရေးယူမှု ဘာမှမလုပ်ကြသည်မှာထင်ရှားပါသည်။
က၊ ထိုကာလထုတ်ဝေသော သတင်းစာ၊ စာနယ်ဇင်းနှင့် စာအုပ်များအရ သိရှိချက်များ ဖြစ်ပါသည်၊ အင်္ဂလိပ်လူမျိုး ကပ္ပတိန်ဗီဗီယန်းနှင့်ဘရင်းဂန်းအလက် (၂၀၀) လက်နက်မှုကြီး ဖြစ်ပါသည်၊ ဗီဗီယန်းသည် စစ်ဘက်မှ ပုလိပ်ဘက်သို့ မကြာမီကမှပြောင်းလာသူ ဖြစ်ပါသည်၊ ပုလိပ်လက်နက်ပစ္စည်း ထောက်ပံ့ရေး ဌာန ရာဇ၀တ်ဝန်ကလေး ဖြစ်သည်၊ ဗီဗီယန်းက ဦးစောကို ဘရင်းဂန်းအလက် (၂၀၀) ထုတ်ပေးခဲ့သည်၊ ၂၄၊ ၆ ၊ ၄၇ နေ့တွင် ဦးစော၏ လူရင်းဖော်ကောင် ဘညွန့်နှင့် အဖွဲ့က ပုလိပ်ယောင်ဆောင်၍ ဗိုလ်တထောင် အမှတ် ၂၂၆ အခြေစိုက် လက်နက်တိုက်မှ ဗီဗီယန်းနှင့် ဦးစောတို့၏ စီစဉ်ပေးမှုဖြင့် လာရောက်ထုတ်ယူသွားခဲ့သည်၊ ထိုစဉ်က ထုတ်ယူသွားသည့် လက်နက်များမှာ ဘရင်းဂန်းသေနတ် အလက်
(၂၀၀)၊ ပြောင်းပို (၂၀၀) နှင့် မဂ္ဂဇင်း ကျည်ကပ် (၈၀၀) တို့ကို အလွယ်တကူထုတ်ယူ သွားခဲ့ကြသည်၊
ခ၊ ဒုတိယအကြိမ် ဗီဗီယန်းက ဦးစောအား ခဲယမ်းကျည်ဆန်များ နောက်ထပ်ထုတ်ပေးပြန်ရာ အရင်တခေါက်အတိုင်း ဦးစော၏ လူရင်းဖော်ကောင် ဘညွန့်နှင့် အဖွဲ့က ၁၀ ၊ ၇၊ ၄၇ နေ့က (၁၆) မိုင်ရှိ မင်္ဂလာဒုံ အခြေစိုက် ခဲယမ်းမီးကျောက်တပ်မှ သွားထုတ်ယူခဲ့ သည်၊ ထုတ်ယူသွားခဲ့သော ပစ္စည်းများမှာပွိုင့် (၃၀၃) ရိုင်ဖယ်နှင့် ဘရင်းသေနတ်ကျည်ဆံ (၁၀၀.၀၀၀)။ စတင်းကျည်ဆံ (၂၅.၆၀၀) (စစ်တပ်ထုတ် တပ်မတော်သမိုင်းတတိယတွဲ-နှာ ၁၄၉ တွင်ကျည်ဆံ (၂၅.၆၀၀) လို့သာဆိုထားရာ ထိုဂဏာန်း ပိုမှန်နိုင်) လက်ပစ်ဗုံး (၂၀၀) တို့ဖြစ်သည်၊ ထိုစာရင်းတွင် စတင်းဂန်းမည်မျှဟု မပါသော်လည်းအရေးအခင်းကြီးပြီးစ (၂၁ ၊ ၇ ၊၄၇) နေ့တွင် ဦးစောအိမ်အနီးရှိ ရေကန်ထဲတွင် သတင်းအရရှာဖွေရာတွင် ရေကန်အတွင်း ရေအောက်လေလုံသေတ္တာတွေအတွင်းတွင် ထည့်ထားသော ဘရင်းဂန်းအလက် (၁၇၀) နှင့် စတင်းဂန်းအလက် (၁၀၀) တို့ကို တွေ့ရှိရမိသည်ဟု ထိုကာလ စာနယ်ဇင်းများတွင်
ဂ၊ ထိုဘရင်းဂန်း အလက် (၂၀၀) နှင့် ကျည်ဆံများကိစ္စမှာ လုပ်ကြံမှုကြီးတွင် ဗြိတိသျှအစိုးရတို့ပါဝင်ကြောင်း ကြီးမားသော အထောက်အထားကြီးဖြစ်ပေသည်၊ဤမျှလောက်များပြားသော (အစိုးရခြေလျင်တပ်ရင်း ၆ ရင်းစာခန့်ဖြစ်ပြီး ထိုကာလ ဗမာ့ တပ်မ တော် တပ်ရင်းများ၏ ထက်ဝက်စာဖြစ်သည်၊) လက်နက်များကို ဦးစောဝယ်ယူတာလည်းမဟုတ်။ ဗီဗီယန်းက ထုတ်ပေးတာသာဖြစ်သည်၊ ဤမျှလောက်များပြားသော လက်နက်ခဲယမ်းများကိုအထက် အာဏာပိုင်တို့. သဘောထားမပါဘဲ ထုတ်ပေးတာမဖြစ်နိုင်၊ ဗီဗီယန်းအတွက် ကိုယ်ကျိုးငွေကြေး ရရှိတာလည်း မရှိပေ၊ အလွန်ထင်ရှားသည့် အချက်ကြီး ဖြစ်ပေသည်။
ဃ၊ ထိုလက်နက်များထုတ်ပေးခဲ့ခြင်းသည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးခြင်းသာမက နောက်တွင် ကြီးမားသော ကြံစည်ချက်ကြီးတခုလည်း ရှိနေသည်ကို ကျနော်တို့ မြင်နိုင်ပေသည်၊ ဤမျှများပြားသော လက်နက်ခဲယမ်းများ ကြောင့် ဦးစောက ဗိုလ်ချုပ်တို့ကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရုံမျှမက နောက်ထပ်ဆက်ပြီး ဗမာပြည်တွင် သူအာဏာာရရှိရေးအတွက် ပုန်ကန်ကြွမှုကြီး ဖြစ်သွားနိုင်အောင်အတွက်ပါ ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ပေးသည်ဟုလည်း ကောင်းစွာထင်ရှား သိနိုင်သည်၊ သို့ဖြင့် ဗြိတိသျှအစိုးရသည် မြန်မာနိုင်ငံကို ပြည်တွင်းစစ်ကြီးဖြင့် ပြိုကွဲအားနည်းသွားစေရန် ကြံစည်အားထုတ်ခဲ့ ကြောင်းလည်း ခန့်မှန်းသိရှိနိုင်ပေသည်၊
က၊ ဦးစောသည် လုပ်ကြံမှုကြီးအတွက် ၁၉၄၆ ခုနှစ် ကစပြီး လက်နက်ခဲယမ်းများ စုဆောင်းနေရာ ကုက္ကိုင်း အမှတ် (၁) ဘီအီးအမ်အီးတပ်မှ
တပ်မှူး အင်္ဂလိပ်လူမျိုး မေဂျာ စီ အိပ်ခ်ျ အိပ်ခ်ျ ရန်းနှင့် ရင်းနှီးကြပြီး ၄င်းထံမှ ဆပ်မရှင်းဂန်းတလက် အမေရိကန်ကာဘိုင် (၃) လက် စတင်းသေနတ် (၁)လက်၊ တော်မီသေနတ် (၂) လက်၊ လူဂါပစ္စတို (၁) လက်၊ ခြောက်လုံးပြူးသေနတ် (၂) လက် နှင့် ယမ်းတောင့်များကို ရယူခဲ့သည်၊
ခ၊ ထိ်ု့ပြင် အင်္ဂလိပ်လူမျိုး ဗိုလ်မှူးလန်းစိန်းထံမှလည်း စပရင်းဖီးရိုင်ဖယ်သေနတ် (၁) လက်၊ တော်မီသေနတ် (၂) လက်၊ ကာဘိ်ုင်သေနတ်(၁) လက် နှင့် ယမ်းတောင့်များကို ရရှိခဲ့သည်၊ (၄င်းလက်နက်များမှာ အချို့ကိုငွေပေး ၀ယ်ယူပုံရသည်၊)
ဂ၊ ထို့ပြင်သတင်းစာများ အဆိုအရ ဗိုလ်ချုပ်ကိုပစ်သတ်သော ကျည်ဆံမှာ အလွန်ပြင်းထန်ပြီး အဆိပ်ပါသောကျည်ဆံဟု ဆိုကြသည်၊မိုင်းပွန်စော်ဘွားကြီး ဒဏ်ရာမပြင်းဘဲ သေဆုံးရသည်ဟု ဆိုသည်၊
ဃ၊ .လက်နက်များမှာ လုပ်ကြံမှုကြီးအတွက် အင်္ဂလိပ်ဗိုလ်မှူး နှစ်ဦးထံမှ ဦးစောက အခိုင်အမာ ကြိုတင်ရရှိထားခြင်းဖြစ်သည်၊
အထက်ပါဒုတိယနှင့် တတိယအထောက်အထားကြီး နှစ်ခုသည် လုပ်ကြံမှုတွင် ဗြိတိသျှအစိုးရ ပါဝင်ကြောင်း အလွန်ထင်ရှားသော
၄၊ နောက်အထောက်အထား အချို့ကတော့။ ဗိုလ်ချုပ်လုပ်ကြံခံရမှု လိုက်လံစုံစမ်းစစ်ဆေးရာမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ထိုစဉ်က ဒုတိယပုလိပ်မင်းကြီး ဖြစ်ခဲ့သူ ကွယ်လွန်သူဦးထွန်းလှအောင်သားဦးခင်အောင်က ၁၉၉၃ ခုနှစ်လောက်ကရေးခဲ့တဲ့ အောင်ဆန်းကို ဘယ်သူသတ်သလဲ စာအုပ်မှ လိုရင်းကို ဘီဘီစီက၁၉၉၃ ခုနှစ်အတွင်း အသံလွှင့်ချက်များကို ကျနော်ရရှိထားရာ ထိုအထဲမှ အတောက်အထားအချို့ကို ဆက်လက်တင်ပြသွားပါမည်။
က၊ ဦးခင်အောင်စာအုပ် ဖော်ပြချက်အရ ဗိုလ်ချုပ်တို့လုပ်ကြံခံရပြီး တပတ်လောက်တွင် ဇူလိုင် (၂၅) ရက်နေ့လောက်တွင် ဗြိတိသျှအစိုးရဤလုပ်ကြံမှုကြီးမှာ ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ဆိုသည့် ကောလာဟလများ ပျံ့နှံ့နေခဲ့မှုကြောင့် ဦးနုအစိုးရသည် ဗြိတိသျှတို့. ဆန္ဒနှင့်လည်း ကိုက်ညီအောင်အောက်ပါကြေညာချက်တခု ထုတ်ရန်စီစဉ်ခဲ့သည်၊ ၄င်းမှာဤလုပ်ကြံမှုကြီးတွင် အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီအစိုးရတို့ မပါဝင်ကြောင်း၊ အင်္ဂလိပ်အစိုးရနှင့်အတူ ဤလုပ်ကြံမှုကြီး၏ တရားခံအစစ်ကိုရဖို့ ကြိုးးစားရှာဖွေလျက်ရှိကြောင်း ဆိုသောတရားဝင် ကြေညာချက်ထုတ်ဖို့ပင် စီစဉ်ခဲ့ရသည်အထိ ဖြစ်ခဲ့ပါသည်၊
ခ၊ သို့သော် ၂၈၊၇၊၄၇ နေ့ထုတ် ရန်ကုန်လမ်းညွှန် သတင်းစာကြီးတွင် ပါလာသော သတင်းတပုဒ်ကြောင့် အခြေအနေပိုဆိုးဝါး လာခဲ့ရသည်၊
ဤသတင်း ဖြော်ပချက်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့အဖွဲ့ ၁၉၄၇ ခု နှစ် ဇန်န၀ါရီလ အောင်ဆန်း - အက်တ လီစာချုပ် ချုပ်ဆိုဖို့အတါက် အင်္ဂလန်ရောက်ခဲ့စဉ်က ဦးစောနှင့် သခင်ဗစိန်တို့က လက်မှတ်ထိုးဖို့ ငြင်းပယ်ခဲ့ကြသည်၊ ဦးစောသည် ဖဆပလကြီးအား ဖြိုခွဲရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အင်္ဂလန်မှာနေရစ်ခဲ့ကြောင်း၊ ထို့အပြင် လူဖြူများ၏ အကူအညီဖြင့် ဦးစော ငွေ (၅) သိန်း လက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း၊ အင်္ဂလန်မှ အရင်းရှင်အချို့က ဦးစောအား ငွေအမြောက်အမြား ပေးခဲ့ကြောင်း စသဖြင့် ရးသားထားပါသည၊် ထိုသတင်း ကြောင့် ဦးနုအစိုးရ၏ အထက်ပါ ကြေညာချက် ထုတ်ရေး အစီအစဉ်ကို မပြုလုပ်ပဲ ရုတ်သိမ်းခဲ့ရပါသည်။
ဂ၊ ထိုကိစ္စမှာ ဗြိတိသျှအစိုးရနှင့် ပဋိပက္ခမဖြစ်လိုတဲ့အပြင် ဗြိတိသျှတို့အပေါ် ကောလာဟလဖြစ်မှုတွေမှ ကာကွယ်ပေးလိုသော
ဦးနုအစိုးရသည်ပင်လျင် ထိုကာလက ဗြိတိသျှတို့နှင့် ပတ်သက်နေတဲ့ အထက်ပါလို သတင်းအမျိုးမျိုးများကြောင့် ကာကွယ်ပေးတဲ့ ကြေညာချက်မျိုးတောင်မထုတ်ရဲအောင် ဖြစ်ခဲ့ရသည်မှာလည်း ထင်ရှားတဲ့အချက်တခု ဖြစ်ပါသည်၊
၆၊ ပဉ္စမအထောက်အထား - ဤတွင်အချက်နှစ်ချက် ပါဝင်ပါသည်၊
က၊ ပထမ - ဦးစောသည် လက်စားချေရေး သက်သက်သာရည်ရွယ်ပါက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တဦးတည်းသာ သတ်ဖြတ်ဖို့ဖြစ်နိုင်သည်၊ယခုမူ ဗိုလ်ချုပ်သာမက အစိုးရတဖွဲ့လုံးနှင့် ဦးနုကိုပါ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်တာဖြစ်သည် (ဗိုလ်ချုပ်အပါဝန်ကြီး (၇) ဦး။ အတွင်းဝန် (၁) ဦးနှင့် သက်တော်စောင့်(၁) ဦးတို့ ကျဆုံးရပြီး ကျန်ဝန်ကြီးအချို့ ကျည်ဆံမထိလို့ လွတ်မြောက်ရသည်) ထို့ကြောင့် လက်စားခြေရေး သက်သက်မဟုတ်နိုင်။ ပြီးရင်အစိုးရသစ်ရာထူးအတွက်ပါ ရည်ရွယ်သည်မှာ ထင်ရှားပါသည်၊
ခ၊ ထိုလုပ်ကြံမှုကြီးပြီးလျင် ဘုရင်ခံက ဦးစောကို အစိုးရသစ်ဖွဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိမ့်မည်လို့ ဦးစောကမျှော်လင့်ချက် ရှိနေသည်၊ ဦးစောကိုဖမ်းရာတွင်
သူ့အိမ်၌ `ဦးစော။ ၀န်ကြီးချုပ်´ ဆိုသောစာတန်းနှင့် လုပ်ထားသော တံဆိပ်တုံးကိုပင် တွေ့ရကြောင်း ဦးခင်အောင်စာအုပ်အရ သိရ သည်၊ ထိုကိစ္စကိုသတင်း စာများနှင့် ဘီဘီစီအသံလွှင့်ချက်များတွင်လည်း ဖော်ပြကြသည်၊ ထိုသို့ဖြစ်လျှင် ဤကဲ့သို့သော မျှော်လင့်ချက်မျိုး ရလာအောင် မည်သူတွေက လမ်းခင်းပေးသနည်း။ ဤသည်မှာ ဦးစောက လုပ်ကြံလာဖို့ လှုံ့ဆော် တိုက်တွန်းပေးသည့် အချက်ကြီးမဟုတ်ပါလား၊ ဤသည်မှာ လုပ်ကြံမှုကြီးဖြစ်လာအောင် မြှောက်ပင့် လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ မက်လုံးကြီး မဟုတ်ပါလား၊
အထက်ပါအချက် (၂) ချက်ကြောင့်လည်း ဤလုပ်ကြံမှုကြီးတွင် ဗြိတိသျှအစိုးရတို့ ပါဝင်နိုင်ပုံကို သိရှိနိုင်သည်၊
က၊ ပထမက ဦးစော၏ရှေ့နေဖြစ်သူ အင်္ဂလန်မှ အင်္ဂလိပ်လူမျိုးရှေ့နေ ဖရက်ဒရစ်ဟင်နရီ သည် အင်္ဂလန်ရှိ သူ့အခန်းတွင် ရုတ်တရက်လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရသည်၊
ခ၊ ဒုတိယက ဗိုလ်ချုပ်တို့လုပ်ကြံမှုကြီးကို အလွတ်စုံထောက်နေသူ အင်္ဂလိပ်လူမျိုး အက်ဖ်ကိုလင် မှာလည်း သူ၏ စာရွက်စာတမ်းများပျောက်ဆုံးသွားကာ လူလည်း ရုတ်တရက်သေဆုံးသွားသည်။ ထိုနှစ်ဦးသေဆုံးကြောင်း ယခင်က ကျန်ာတို့ မသိခဲ့ရ။ ဦးခင်အောင်စာအုပ်အရသာသိရသည်။အလွန်စဉ်းစားကြည့်စရာများ ဖြစ်ပါသည်၊ အမှုကြီး၏အရင်းခံ အဖြစ်အပျက်အချို့ကို သူတို့သိနေသဖြင့် နောင်ပေါက်ကြားမှာစိုး၍ ယခုလို အဆုံးစီရင် လိုက်ပုံရသည်၊
ဤကိစ္စသည်လည်း လုပ်ကြံမှုကြီးတွင် ဗြိတိသျှအစိုးရတို့ ပါဝင်နိုင်ပုံကို များစွာသံသယ၀င်ဖွယ် ဖြစ်သည်၊
ဦးခင်အောင်စာအုပ်အရ သိရသည်မှာ ဦးစောသေဒဏ်စီရင်ချက် ချခံရပြီးနောက်ကြိုးးမိန့်ပေးခံရသူများ၏ အကျဉ်းထောင်အခန်းတွင်း နေရစဉ်သူလွတ်မြောက် ထွက်ပြေးရေးအတွက် ဗြိတိသျှအရာရှိများထံ အကူညီတောင်းခံမှုဖြစ်သည်၊ ဦးစောသည် ထိုကာလတွင်းက ထောင်မင်းကြီးဦးစံတင်ကိုလွတ်မြောက်ရေးအတွက် ငွေအမြောက်အမြားပေးမည်ဟု ဆိုပြီး ချဉ်းကပ်ခဲ့ဖူးသည်။ ဦးစံတင်က ဦးထွန်းလှအောင်နှင့် တိုင်ပင်ပြီး စီမံချက်တခုလုပ်ကာ ငွေပေးရင် လုပ်ပေးမည်ဟု ပြောရာ ထိုမှစပြီး ဦးစော၏ငွေရှာပုံတော်ကြောင့် ဦးစောနှင့်ဆက်စပ်သူ အင်္ဂလိပ်များအကြောင်း အံ့သြဖွယ် တွေ့ရတော့သည်ဟု ဆိုထား ပါသည်၊ ၄င်းငွေတောင်းစာများတွင် နာမည်ဝှက်များနှင့် စကားလုံးတွေပါ ရေးထားသည်၊
က၊ ပထမဆုံး ဦးစောငွေတောင်းသူကတော့ ကပ္ပတိန်ဗီဗီယန်း ဖြစ်ပါသည်၊ (ဦးစောကို ဘရင်းဂန်း ၂၀၀ နှင့် ခဲယမ်းများ ထုတ်ပေးသူဖြစ်သည်၊)
ဦးစောသည် ၄င်းဗီဗီယန်း - လက်နက်ထုတ်ပေးမှုဖြင့် ထောင်ထဲရောက်နေမှန်း မသိပေ၊ ဗီဗီယန်းက ဦးစောထံပြန်ပေးစာတွင် ငါတို့အားလုံး စီစဉ်ပေးနိုင်သည်၊ မင်းဘာလို့ လူရှည်ကြီးကို မဆက်သလဲ ဟု ရေးထားသည်ဟုဆိုထားသည်၊
ခ၊ ဦးစော ဒုတိယအရေးတကြီး ဆက်သွယ်သူမှာ ရန်ကုန်မြို့ ဗြိတိသျှကောင်ဆယ်က မစ္စတာ ဂျွန်စတီးဝပ်ဘင်ကလင် ဖြစ်ပြီး ငွေတောင်းစာရေးပြီးဆက်သွယ်တာဖြစ်သည်၊ (၄င်းမှာ ဗြိတိသျှသံတမန်ဖြစ်၍ နိုင်ငံရေးအရ ပိုအရေးကြီးသူဖြစ်သည်) ဘင်ကလင်က ထိုစာကိုဖတ်လိုက်ရတော့ သိပ်ခြောက်ခြားပြီး စာကိုဖျက်ဆီးကာ စာလာပို့သူ ပုလိပ်အရာရှိကို မောင်းထုတ်လိုက် သည်၊ နောက်ဦးစောက ၄င်းဘင်ကလင်ထံ သြဂုတ်လ ၂၂ - ၂၃ရက်နေ့များမှာ စာတွေထပ်ပို့သည်၊ ငွေတောင်းတာသာမက ခြိမ်းခြောက်သည့်စာများပါ ရေးခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်၊ သို့ရာတွင် ဘင်ကလင်ထိုစာများမရတော့ပါ၊ အကြောင်းမှာ ဦးစော၏ ပထမစာရပြီးကတည်းက သူဗမာပြည်မှ ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်ပြီး နေအိမ်မှ ကမ်းနားလမ်းဟိုတယ်သို့ ပြောင်းနေခဲ့သည်၊
သူထွက်ခွာဖို့ စီစဉ်နေတုန်း သူ့ကိုဖမ်းဖို့ ဦးထွန်းလှအောင်က ထိုစဉ်က ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်ငြိမ်းထံ အကြောင်းကြားခဲ့သည်၊ ဦးကျော်ငြိမ်းကဘုရင်ခံထံတင်ပြရာ ဘုရင်ခံက သက်သေအထောက်အထားတွေ ထပ်မံတောင်းဆိုသည်ဟု ဆိုသည်၊ နောက်တနေ့ ဦးထွန်းလှအောင်က သူမထွက်ခွာမီရုတ်တရက် ထပ်သွားပြီး ဦးစော၏ နောက်ဆုံးစာကိုပြသည်၊ ဘင်ကလင်က ထိတ်လန့် ကြောက်ရွံ့သွားပြီး သူကိုဖမ်းလို့မရကြောင်း သူ့အနေဖြင့် သံတမန်ရေးရာ အကာအကွယ်များ ရှိထားကြောင်း ပြောပါသည်၊ ဤကိစ္စအပေါ် ဦးခင်အောင်ရေးထားသည်မှာ အမှန်ကတော့ မစ္စတာဘင်ကလင်အနေနှင့် ဗိုလ်ချုပ်တို့ လုပ်ကြံခံရမှုမှာ ၄င်း ဘယ်လိုပတ်သက်သလဲဆိုတာ အသေအချာသိလို့ပဲ ဖြစ်တယ် ဟု ဆိုထားပါသည်၊ ဦးထွန်းလှအောင်က သူ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှအပြီးအပိုင် ထွက်သွားရန်ပြောခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်၊ ထိုနေ့ ၄၊ ၉၊ ၄၇ နေ့ကစပြီး ၄င်း ဘယ်ရောက်သွားသည် အစမပေါ်တော့ ဟုဆိုသည်၊
ဂ၊ ဗီဗီယန်သည် ဘရင်းဂန်း (၂၀၀) နှင့် ကျည်ဆံများစွာ ဦးစောကိုထုတ်ပေးခဲ့သူဖြစ်၍ ဤလုပ်ကြံမှုနှင့် ပတ်သတ်ရာတွင် အရေးအပါဆုံးသူဖြစ်သည်၊ နောက်ဘင်ကလင်ဆိုသူမှာလည်း ဗြိတိသျှသံတမန်ဖြစ်၍ အရေးပါသူပင်ဖြစ်သည်၊ ဗိုလ်မှူးယန်းကို ဖမ်းဆီးပြီးစစ်ဆေးသောအခါတွင်လည်း၎င်း ဖြောင့်ချက်အရ ဦးစောနှင့် ဗြိတိသျှကောင်ဆယ်မှ ဘင်ကလင်တို့. ဆက်သွယ်မှုသည် သာမန်ထက်ပို၍ ဆက်သွယ်မှုရှိကြောင်း ဆိုထားပါသည်၊ ဗြိတိသျှအစိုးရမှ ထိုအရေးပါသူ (၂) ဦးထံသို့ ဦးစောက အရေးကြုံသောအခါ ငွေတွေအတင်းလှမ်းတောင်းယူပုံတွေကို ထောက်၍ထိုလုပ်ကြံမှုတွင် ဗြိတိသျှ အစိုးရတို့ပါဝင်နိုင်ပုံကို သိမြင်ယူဆနိုင်ပေသည်၊
၉၊ နောက်ဆုံး အဌမအထောက်အထားမှာ -
ဦးခင်အောင်စာအုပ်အရ အထက်ပါဗီဗီယန်း၏ နောက်ဆုံးအဖြစ်အပျက်ပင် ဖြစ်ပေသည်၊ ဖော်ပြထားပုံအရ ၄င်း ဗီဗီယန်းသည် ၁၉၄၉ ခုနှစ်မေလ အင်းစိန်တိုက်ပွဲမှ ကရင်များဆုတ်သွားရာတွင် အင်းစိန်ထောင်မှ လိုက်ပါသွားပြီး ၁၉၅၀ ခုနှစ်အထိ ကော့ကရိတ်မြို့အနီးတွင် စောဘဦးကြီးနှင့်အတူ ရှိနေခဲ့သည်၊ မြန်မာအာဏာပိုင်များက သူ့ကိုသတ်လိုက်ပြီဟု ဆိုသော်လည်း သူသည် ၁၉၅၀ ခုနှစ် အလယ်ပိုင်းလောက်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံမှတဆင့် အင်္ဂလန်သို့ ပြန်သွားပြီး ၁၉၈၀ ခုနှစ်လောက်တွင်မှ ကွယ်လွန်သွားသည်ဟု ဆိုထားပါသည်၊ အမှုကြီးအတွက် အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်လွတ်မြောက်သွားပုံ ဖြစ်ပါသည်၊ ဤတွင်လည်း ဗြိတိသျှအစိုးရတို့ ပါဝင်နိုင်ပုံကို ထင်ဟပ်သည်၊
အထက်ဖော်ပြပါ အထောက်အထားများကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်တို့လုပ်ကြံမှုကြီးတွင် ဗြိတိသျှအစိုးရတို့ ပါဝင်ကြောင်း ကျနော် ကောင်းစွာထင်မြင်ယူဆပါသည်၊ အထက်ဖော်ပြပါ အထောက်အထားများအနက် နံပါတ် (၂) ဗီဗီယန်းက ဦးစောအား ဘရင်းဂန်း (၂၀၀) နှင့် ကျည်ဆံများထုတ်ပေးမှုသည်၊ဗြိတိသျှအစိုးရတို့ ပါဝင်ကြောင်းအထင်အရှားဆုံး အချက်ကြီးဖြစ်သည်၊ ဒုတိယ ထင်ရှားသည့်အချက်မှာ နံပါတ် (၃) အရ လုပ်ကြံရေးအတွက် လက်နက်များ ကျည်ဆံများရောင်းတဲ့ ဗိုလ်မှူးယန်းနှင့် လန့်စဒိန်းတို့အမှုဖြစ်သည်၊ ဗီဗီာန်း ၏ဘရင်းဂန်း ၂၀၀နှင့် ကျည်ဆံများဦးစောအား ထုတ်ပေးမှုသည် လုပ်ကြံမှုကြီး ဖြစ်ရန် တွန်းဆော်ပေးရုံသာမျှမက နောက်ပိုင်းဦးစော အာဏာရရေး ပုန်ကန်ကြွရေးအတွက်ပါ ရည်ရွယ်သည်ဖြစ်သဖြင့် ထိုစဉ်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း.ဖဆပလ တပ်ပေါင်းစုကြီးအောက်တွင် စည်းလုံးညီညွတ်လာနေသော မြန်မာပြည်ကြီးကိုလည်း ပြည်တွင်းစစ်ဖြင့် ဖြိုခွဲအားနည်းသွားစေရန် လုပ်သောလုပ်ကြံမှုကြီးတခု လည်းဖြစ်သည်၊ ၄င်းမှဆက်၍ တွေးခေါ်နိုင်သည်မှာ ဦးစောလုပ်မသွားနိုင်သည့် နောက်ပိုင်းဖြစ်လာသော ဗမာပြည်၏ ပြည်တွင်းစစ်များ ဖြစ်လာအောင် လုပ်ရာတွင်လည်း ဗြိတိသျှအစိုးရတို့ တနည်းတဖုံပါဝင်ကြသည်ကို မျှော်မှန်းသိမြင်နိုင်ပေသည်၊
အထက်ပါအကြောင်းများကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ ခေါင်းဆောင်ကြီးများ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုတွင် ဗြိတိသျှအစိုးရတို့ ပါဝင်သည်ကို ကျနော်ထင်မြင်ယုံကြည်ရုံမျှမက ယခုနှစ် (၅၀) ကျော်ကြာ ဗမာပြည် ပြည်တွင်းစစ်ကြီး ဖြစ်လာအောင် ဖန်တီးကြရာတွင်လည်း ဗြိတိသျှအစိုးရတို့ တနည်းတဖုံပါဝင်နိုင်ကြောင်းလည်း ကျနော်ထင်မြင်ယူဆပါသည်၊
ဤသည်များမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလုပ်ကြံခံရမှု အနှစ် (၅၀) မြောက် အထိမ်းအမှတ်အတွက် ဘီဘီစီအသံလွှင့်ဌာနမှ ကျနော်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှ မေးခွန်း အမှတ် (၁) (၂) နှင့် ၄င်းတို့အပေါ် ကျနော်. ဖြေကြားချက်များ ဖြစ်ပါသည်၊
Labels: မေ့မရသည့် သမိုင်းများ
posted by မြင့်ဇေ @ 2:06 AM
ဆဲဗင်း ဂျူလိုင် နှင့် ပတ်သက်သည့် အချို့ သော အချက်အ...
၇ ဇူလိုင်ပုံတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။